Myanmar Monk Student Association: ကျောက်ကွင်းဝါဒပြိုင်ပွဲ (၂၂)
သဘာပတိ နှစ်ဦး နေရာယူပြီးကြသောအခါ ----
ပရိသတ်ငြိမ်သက်သွားသည်၊ ဆရာကြီးဦးရွှေမှန်က မိန့်ခွန်းမပြောတော့သဖြင့် တောင်ငူ-လောကုတ္တရာ
ဆရာတော် အရှင်ကုဏ္ဍလကပင် သဘာပတိ မိန့်ခွန်းပြောရသည်။ သဘာပတိဆရာတော်က နှစ်ဘက်သော
ပရိသတ်တို့ မနက်က ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာ နားထောင်၍ အားပေးကြသဖြင့် အလွန်ဝမ်းမြောက်
၀မ်းသာကြောင်း, ယခုလည်း မနက်ကအတိုင်း ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာ အားပေး နားထောင်ကြပါရန် မေတ္တာ
ရပ်ခံပါကြောင်း အတိုချုပ်မိန့်ကြား၍ စည်းမျဉ်းအရ ပထမ အလှည့်ကျသူ ဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်
ဆရာတော်အရှင်ဥက္ကဋ္ဌသည် သမ္မာကျမ်းစာများနှင့် မှတ်စုများကိုယူ၍ ဟောပြောမည့် စင်မြင့်ပေါ်သို့
တက်သွားသည်။ ထို့နောက် အောင်မြင်ခန့်ညားသော အသံဖြင့် ပရိသတ်ပေါက်အောင်
ဦးပဇင်းတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဂေါတမ ဘုရားရှင်ဟာ ဆင်ခြင်တုံတရားကို အများကြီး အားပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။
မည်သည့်တရားကိုမဆို မစုံစမ်း၊ မစစ်ဆေးဘဲမယုံကြည့်ကြနဲ့လို့ ဂေါတမရှင်တော်ဘုရားက
ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ (ဧဟိပဿိကော) လာလှည့်, ကြည့်လှည့်, စမ်းကြည့်-ဆိုတဲ့
ဂုဏ်မျိုးဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဘာသာတရားတွေထဲမှာ ဘယ်ဘာသာတရားမှာမှ မရှိပါဘူး။
ဒီဂုဏ်မျိုးကို ဂေါတမရှင်တော်ဘုရားရဲ့တရားတော်မှာသာ တွေ့နိုင်ပါတယ်………”။
“ဘာဖြစ်လို့ ဂေါတမရှင်တော်ဘုရားက လာကြည့်၊ စမ်းကြည့်လို့ ရဲရ၀ဲံ့ဝံ့ ပြောရဲတော်မူရသလဲ?
သူ့တရားဟာ မှန်ကန်ကြောင် သေသေချာချာ သိတော်မူလို့ပေါ့၊ ဓမ္မဆရာကြီးတို့ရဲ့ ခရစ်တော်ဟာ
ငါပြောတာသာ ယုံကြည်ကြ၊ ဆင်ခြေမတက်ရဘူးလို့ ဘာကြောင့် ပြောခဲ့ ရတာလ?ဲ ၊
အဲဒါစဉ်းစားကြည့်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်တရားကို ကိုယ်တကယ် ယုံကြည့်စိတ်ချရင် ရဲရဲကြီး ဆင်ခြေပေးနိုင်စွမ်းရှိရမယ်မဟုတ်ပါလား? သူ့တရားဟာ ယုံကြည် စိတ်ချရခြင်းမရှိဘူး။ ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှု မရှိဘူးဆိုတာဒအီ ချက်ကပဲထင်ရှားနေပါပြ၊ီ (သြဘာသံကြီး)။
“အခုလည်း ဦးပဇင်းပြောခဲ့သမျှ ဟောနေသမျှနှင့် ပြောလတ္တံ့သော စကားတွေကို ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်စွဲနှင့်
မှန်တယ်လို့လည်း မယူဆစေလိုပါ။ မှားတယ်လို့လည်း တစ်ဘက်သတ် ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို အလျင်စလို
မပြုလုပ်ကြစေလိုပါ။ လောကယုတ္တိ/သဘာဝယုတ္တိ ရှိ/မရှိ စဉ်းစားဆင်ခြင်၊ စုံစမ်း စစ်ဆေးပြီးတော့မှ
“ကဲ……ဒီတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း ဦးပဇင်းအကျဉ်းချုံးပြီး ရှင်းရှင်းတင်ပြပါမယ်.။
* ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုသည်မှာ ဘာလဲ?
* ဘာကိုရည်မှန်းပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ကြသလ?ဲ
* ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဟာ ဘာလဲ?
* အဲဒီပန်းတငိုရောက်ဖို့ ဘယ်တရား၊ ဘယအ် ကျင့်များဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်သလ?ဲ
* လောကီအနေဖြင့် ဘာအကျိုးရှိသလဲ?
* လောကုတ္တရာ အနေဖြင့် ဘယ်လိုအကျိုးဖြစ်သလဲ?
“အဒဲါတွေကို သိရင်ဗုဒ္ဓ၀ါဒရဲ့ အနှစ်ချုပ်ကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။ အဒဲီလို သိရင်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓ၀ါဒဟာ ကမ္ဘာမှာ
အမြင့်မြတ်ဆုံးနဲ့ အမှန်ကန်ဆုံးဆိုတာ သဘောပေါက်သွားပါလိမ့် မယ်….”။
“ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂၅၀၀)လောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အထောက်အထား
ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ပွင့်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဘယ်ဘာသာတရားမှာမှ မရှိတဲ့ သစ္စာလေးပါး အမှန်တရားကို ဆရာမကူ
သယမ္ဘူဉာဏ်တော်နှင့် မိမိအလိုလို ကိုယ်တော်တိုင် ထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓအမည်
ဘွဲ့တော်ရှိတဲ့ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမဒေသာနာတော်ကို ယုံကြည်လိုက်နာပြီး ဆည်းကပ်ခံယူတဲ့
“သံသရာဝဋ်ဒုက္ခမှ လွတ်မြောက်ရန် ရည်မှန်းပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗုဒ္ဓ၀ါဒကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ဆည်းကပ်ခံယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ.် .”။
“ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဟာ ၀ဋ်ဒုက္ခမှအေးငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဒဲီပန်းတိုင်ရောက်ဖို့အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ဗုဒ္ဓဂေါတမ ညွန်ပြဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့ တရားဓမ္မများကို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးကြရမယ်။ အထူးသဖြင့် မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး အကျင့်မြတ်တရားကို ကျင့်သုံးကြရမှာကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့ တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်….”။
“ဗုဒ္ဓဘာသာ-ဗုဒ္ဓ၀ါဒဟာ လောကီရေးရာ တိုးတက်ကြီးပွားမှုကို မဟန့်တားသလို
ဆုတ်ယုတ်နိမ့်ကျမှုကိုလည်း အားမပေးပါဘူး။ ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရား ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ သမ္ပဒါန်တရား
လေးပါးနှင့်အညီ ကျင့်သုံး ကြမယ်ဆိုရင် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ပဲ လက်တွေ့မျက်တွေ့ကြီးပွား
တိုးတက်နိုင်ပါတယ်၊ အဒဲီလို လောကီရေးရာများကို ဆောင်ရွက်ရင်းနဘဲ့လောကုတ္တရာတရားများကိုလည်း
ကျင့်သုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဆည်းကပ်လိုက်နာရင် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်း သမဘာဂဖြစ်ပြီး
အဆင်ပြေအောင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ လူမျိုးကွဲ ဘာသာကွဲတွေနဲ့ အတူနေထိုင် ၀န်မလေးပါဘူး၊
အထောက်အထား ဒေသနာတော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အချိန်မရလို့
အဒဲါလောက်ပဲတင်ပြရတာပါ …”။
“မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး အကျင့်မြတ်တရားကို ကျင့်သုံးပွားများပြီး အရာရာကို လက္ခဏာရေး နှင့်ရှုမြင်တတ်ရင်
မဂ်တရား၊ ဖိုလ်တရားများကို ရရှိပြီးတော့ ၀ဋ်ဒုက္ခငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာနဓာတ် သန္တိသုခအလွန်အေးမြတဲ့ ချမ်းသာကို
အခု မျက်မှောက်ကာလမှာပင် ရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါလောကီရေးနှင့် အလွန်ခြားနားတဲ့ လောကုတ္တရာပဲ
အမှာ။ ။ဤဘာသာရေးဟောပြောပွဲ စာတမ်းသည် တစ်ခေတ်တစ်ခါက မြန်မာပြည်မှာ တရားဝင် တကယ်ဖြစပ်ျက်ခ့ေဲ သာ ဟောပြောပွဲ စာတမ်းဖြစပ်ါတယ်။ ရည်ရယ်ချက် ။ဤဟောပြောပစွဲာတမ်းကို တင်ရခြင်းသည် ဒီစာတမ်းကို လေ့လာဖတ်ရှုပြီး မိမိတို့ အနေနှင့် ရခလှဲတ့လဲ့ ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ်အရာကို မဆို သူများပါးစပ်ဖျားမှာ လမ်းမဆုံးစေပဲ ကိုင်ပိုင် စူစမ်းဆင်ချင် ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ ဉာဏ်ရအောင် လုပ်ပြီး ဘာသာရေး လူမှုရေး အသိပညာတိုးပွားစေရန် ရည်ရယ်ပါသည။် -----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတ္ထိ------------------------
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ လခြမ်းမြီ on Monday, 14 February 2011